musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waini & Midzimu » French Wines: Yakaipisisa kugadzirwa kubvira 1970
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • France Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Waini & Midzimu
Sei kutenga French Wines ikozvino uye kwete mangwana
France inozivikanwa neumbozha uye inosanganisirwa mune ino dhizaini mawaini ayo. Nyika inogadzira zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvewaini yenyika uye inoshandisa vanhu vanopfuura 16 muchikamu chinorimwa waini chete.
Tsvakurudzo yeReuters yakasarudza kuti iyo Waini yechiFrench kugadzirwa kwemaindasitiri kungangodonha nezvikamu makumi matatu muzana gore rino, zvichienzaniswa negore rapfuura, zvichiita kuti 30 rive gore rakaipisisa kubvira 2021 uye ringangove gore rakaipisisa parekodhi.
Zvikonzero zvenhau dzakaipa idzi zvinosanganisira chando chaApril, Covid 19 mhirizhonga, hondo yekutengeserana yaPresident Trump yakanangana newaini yeFrance, mafashama ezhizha akasanganiswa nekupisa kwakanyanya kunotungamira mukuumbwa kwefungus pamizambiringa yakaparadza zvirimwa zvakawanda.
Vanoda waini vanofanirwa kutora mawaini avo echiFrench ZVINO mukugadzirira mwaka wezororo uye edza kudzivirira mitengo yakakwira parejista yemari.
Sancerre iri kumucheto kwekumabvazuva kwenzvimbo huru yemunda wemizambiringa weLoire Valley uye padyo neCote d'Or muBurgundy pane kune mamwe matunhu akakosha ewaini eLoire eAnjou neTouraine. Nzvimbo yeviticultural inovhara 15-mamirimita ezvikomo zvinotenderedza kumadokero kwemahombekombe eLoire ine 7000 maeka emizambiringa yakazvipira kugadzira waini yezita.
Mhando dzevhu dzakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: choko, limestone-gravel, uye silex (flint). Flint inowanzozivikanwa nekuda kwekunhuhwirira kwehutsi pierre fusil (gunflint) uye chikonzero cheSauvignon pseudonym Blanc Fume.
Sancerre inozivikanwa nokuda kwewaini yayo yakachena, inonhuhwirira yakagadzirwa kubva kuSauvignon Blanc. A classic Sancerre chena, bracingly acidic ine manotsi egooseberries, uswa, nettle uye stony minerality. Phylloxera akatsvaira minda yemizambiringa pakati pezana ramakore rechi 19 achiparadza makwara emhando zhinji dzewaini tsvuku dzakadai seGamay nePinot Noir. Minda yemizambiringa yakasimwazve muSauvignon Blanc uye nzvimbo yakagamuchira chimiro cheAOC muna 1936.
Iyo 2020 Domaine Girard Sancerre. Notes. 100 muzana Sauvignon Blanc. Domaine Fernand Girard inotungamirwa naAlain Girard, ichitevera tsoka dzezvizvarwa zvevagadziri vewaini mumusha weChaudoux, uri mamaira mashoma kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweSancerre uye kuchamhembe kweCavignol. Munda wemizambiringa unofukidza mahekita gumi nemana uye Girard anotengesa mamwe macuve kune vanobvumirana uye pachake mabhodhoro chikamu chezvakagadzirwa pasi pezita remhuri yake. La Garenne cuvee yakatanga mumunda wemizambiringa une 14-hectare pamawere akatarisana nekumabvazuva ane ivhu reraimu rine matombo. Iyo ivhu rechalky inosimudzira hunhu hunotsvedza, mineral uye girinhi manotsi eSauvignon Blanc.
Nzvimbo iyi inoshandisa tekinoroji yemazuva ano inosanganisira pneumatic press, stainless steel vats, tembiricha yekudzora hurongwa panguva yekuvirisa uye nzvimbo ine air-conditioned yekuchembera mumabheti nemabhodhoro ekuisira. Kunyangwe tekinoroji iyi iri yezana ramakore rechi21, nzira dzechinyakare dzinoshandiswa mumunda wemizambiringa umo mishonga yesora uye marapiro anoshandiswa zvishoma, uye mbiriso yekutengeserana haiunzwe kuti ivirise kana kuwedzera kunaka. Mhedzisiro yacho iSancerre inopa kunhuhwirira kwakanaka, pamwe nehunyoro hunyoro ine yakaderera astringency.
Alain Girard - Mufananidzo naNoah Oldham
Ziso rinopihwa mubairo wegoridhe rakachenuruka uye mhino inoona zvinonhuwira, svuura reremoni, huswa hutsva hwakasvibira, maapuro egirinhi, zvimedu zveremoni nedombo. Yakabatana zvakanaka nehove chena chena mucaper sauce asi inomira yega nesimba uye chiremera.
Verenga Chikamu Chekutanga pano: Kudzidza nezve waini dzeLoire Valley paNYC Svondo
Imwe "imhosva yaTrump."
Mitero yeUS yaive mhinduro kune kusarongeka kweEU kune Airbus, sezvakataurwa neWTO. Mitemo iyi yaiitirwa kuunza kuenzana kuUS-EU kutengeserana. Zvingave zvinobatsira kutaura nyaya yese uye nekupedza kupa Trump mhosva.